Ejipta : mandrisika an’i Arabie Saoudite hampitsahatra ny fanavakavahana atao amin’ny vehivavy i Dalia Ziada · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Marsa 2009 14:38 GMT
Tsy nahazo nanatanteraka “O'mra!” aho [ny fanao farany kely indrindra any La Mecque] Nahoana? Satria aho tanora zazavavy latsaky ny 45 taona! Ny vahaolana tokana azoko atao hahazoako miditra ny tanin'ny mpaminany mamiko dia ny hoe tsy maintsy miaraka amina mpiaro lehilahy aho. Mbola tsy ampy taona ko any reniko!!! Fantatrao moa hoe iza izany mpiaro lehilahy izany? Ny havana lehilahy akaiky anao indrindra: ray, anadahy, vady, na zanaka lahy! Misalasala be aho noho izany. Efa maty ny raiko, tsy dia taitra amin'izany loatra ny anadahiko anankiroa ary tsy afaka miantoka ny saran-dalany manaraka ahy aho, mbola tsy manam-bady aho ary mazava ho azy fa tsy manana zanaka lahy!! Dia inona izany no hataoko?!